अहिलेको मतगणनामा मलाई इन्ट्रेष्ट नै छैन : केशव स्थापित – Sandesh Press
May 17, 2022 555
पछिल्लो मत परिणाममा स्थापित बालेनभन्दा ३५५३ ले पछाडि छन् । बालेन ७५३५ मतसहित शिखरउन्मुख रहँदा स्थापित ३९८२ मतसहित पिछा गरिरहेका छन् ।
Prevयी १० नेपाली सेलिब्रेटी, जसले अल्पायुमै रोजे मृ-त्युको बाटो !
Nextफेरि बढ्यो सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा, कहाँको कति ?
बसपार्क यौ,न बजारः रात परेसँगै प्रहरीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ (भिडियोमै हेर्नुस्)